Umfana oqashisayo - Wikipedia
UMiyagawa Isshō, uSamurai uqabula umlingisi wesilisa, ca. 1750
Ubufebe besilisa isenzo noma umkhuba wamadoda ahlinzeka ngezinsizakalo zocansi ngenhloso yokukhokha.Kuyindlela yokusebenza ngocansi.Yize amaklayenti kungaba yibuphi ubulili, iningi labo ngabesilisa.Uma kuqhathaniswa nabaqwayizi besifazane, abaqwayizi besilisa abakafundwa kangako ngabaphenyi.
Amagama esetshenziselwa besilisa izifebe ngokuvamile zihlukile esetshenziselwa nabesifazane.Amanye amagama ayahluka ngamakhasimende noma ngendlela yebhizinisi.Lapho ukudayisa ngomzimba kungavunyelwe noma Taboo, kuvamile ukuba izifebe zesilisa ukusebenzisa euphemisms okuyinto ukwethula ibhizinisi labo nokunikeza ubungane ukumodeliswa nude noma ukudansa, umzimba ukubhucungwa, noma enye eyamukelekayo Imali i-service ilungiselelo. Ngakho-ke umuntu angabizwa ngokuthi ngumkhaphi wesilisa, i- gigolo (okusho amakhasimende abesifazane), umfana oqashisayo, u- hustler (ovame kakhulu kulabo abacela ezindaweni zomphakathi), imodeli, noma i- masseur.Umuntu alibheki yena njengoba gay noma ngithanda abesilisa nabesifazane, kodwa ocansini namaklayenti besilisa ngemali, ngezinye izikhathi ibizwa ngokuthi gay i-pay, noma ukuhweba.
Amakhasimende wesilisa, ikakhulukazi lawo acosha abaqwayizi emgwaqweni noma ezindaweni zobhawa, kwesinye isikhathi abizwa ngama- johns noma amaqhinga.Labo abasebenza ngokudayisa ngomzimba, ikakhulukazi abaqwayizi basemgwaqweni, kwesinye isikhathi babiza isenzo sobufebe njengokuguqula izinto.
"https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Umfana_oqashisayo&oldid=91454" تان ورتل
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-16 uNcwaba 2021, nge-00:02.